Faahfaahin khasaaraha kadhashay qarixii Hotel SYL iyo Alshabab oo sheegatay. – Radio Daljir
Faahfaahin khasaaraha kadhashay qarixii Hotel SYL iyo Alshabab oo sheegatay.
Agoosto 30, 2016 5:59 b 0
Garoowe, Aug 30 2016–Wararkii ugu dambeeyey ee aan helnay ayaa sheegaya in Qarixii maanta kadhacay Hotelka SYL ay ku dhaawacmeen Xildhibaano ka tirsan Dowladda Soomaaliya iyo wariyeyaal ka howlgala warbaahinta Qaranka oo halkaasi ku sugnaa.
Inta la ogyahay in ka badan 15 Qof ayaa ku dhimatay Qaraxan halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 40 Qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Dhanka kalena waxaa weerarkaasi Ismiidaaminta ah lasheegay inay kudhaawacmeen ilaa saddex kamid ah mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya iyadoona ay warbaahinta qaar sheegayaan inuu wasiiro dhaawac fudui kasoo gaarey.
Ururka Alshabaab ayaa war ay soodhigeen warbaahinta ay adeegsadaan waxa ay ku sheegteen Mas’uuliyada weerarkan, waxaana ay sheegeen in khasaare ay ku gaarsiiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda.
(Daawo Sawiro) Musharax Madaxwayne Cali Xaaji Warsame oo maalintii 2aad ku sugan Baladwayne
Sawirro+Warbixin-Qarixii lala beegsaday hotelka Syl ee Magaalada Muqdisho.